The Samsung Galaxy Tarisa 4 chinhu chakakosha kune ese Samsung neGoogle. Kwete chete iyo Samsung dhivha yayo yakaedzwa-uye-yechokwadi smartwatch chikuva, asi zvakare kuvimba neGoogle kuti isasiye bhora paWear OS (zvakare). Google, zvakadaro, iri kuvimba neSamsung kuratidza izvo zvinogona kuitwa neNew Wear OS, isina zvakawanda zvekutaura papuratifomu-yakatarisana nevashandisi kana Hardware pazvinoratidzwa.
Mhedzisiro, kusvika parizvino, yakavhenganiswa. Samsung inorema-ruoko nzira yesoftware inopenya iyo nyowani Wear OS chiitiko, zvichikonzera isu kushamisika kuti ndezvipi zvinhu zviri zveSamsung uye ndezvipi zvinhu zvinozoonekwa pane ramangwana Wear OS 3 watches. Zvisinei, iyo Galaxy Watch 4 inopa chimwe chinhu kune vazhinji vatengi - chero bedzi ivo vatengi vacho vari chaizvo muSamsung zvigadzirwa. Dzidza zvakawanda mune yedu yakazara Samsung Galaxy Tarisa 4 ongororo.
Izvo zvaunoda kuziva nezve iyo Samsung Galaxy Watch 4
Chikwereti: Jimmy Westenberg / Android Chiremera
Samsung Galaxy Tarisa 4 (40mm Makaralı-chete): $ 249 / € 369 / £ 369
Samsung Galaxy Tarisa 4 (44mm Makaralı-chete): $279
Samsung Galaxy Tarisa 4 (40mm LTE): $299
Samsung Galaxy Tarisa 4 (44mm LTE): $329
Samsung Galaxy Tarisa 4 Classic (42mm Makaralı-chete): $ 349 / € 269 / £ 259
Samsung Galaxy Tarisa 4 Classic (46mm Makaralı-chete): $379
Samsung Galaxy Tarisa 4 Classic (42mm LTE): $399
Samsung Galaxy Tarisa 4 Classic (46mm LTE): $429
Iyo Galaxy Watch 4 ndeye Samsung's itsva mureza smartwatch ya2021. Izvo zvakasiyana neyakatangira Samsung smartwatches mukuti iri kumhanyisa vhezheni nyowani yeGoogle smartwatch chikuva, Wear OS, iyo yakagadziriswa pamwe nemakambani ese ari maviri.
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 inouya mumavara maviri: iyo Galaxy Watch 4, inova iyo sportier vhezheni uye yakanangana nekutevera-kusvika ma2019's Galaxy Watch Anoshanda 2; uye iyo Galaxy Watch 4 Classic, iyo inogadzirwa neyemhando-yekupedzisira zvigadzirwa uye ndeyekutevera-kusvika 2020's Galaxy Tarisa 3. Ose maWatch 4 neWatch 4 Classic anopihwa mumadiki uye makuru uye ane sarudzo dzeLTE-dzakabatana.
Kunyangwe ndeupi musiyano waunotenga, iwe unowana iwo akafanana ficha yakatarwa uye kazhinji yakafanana yakafanana yemukati Hardware. Izvi zvinoitirwa kuve zvese-asi-iyo-kicheni-inodzika smartwatches, saka ivo vanopa zvakawanda zvehungwaru maficha, kugwinya- uye hutano-hwekuteedzera nzira, uye nezvimwe. Ivo vanogona kubatika pamwe neakawanda mafoni eApple, asi chakanakisa chiitiko chichava nacho nepaviri Samsung foni (zvimwe pane izvo gare gare).
Iwe uchawana zvirinani zvemavara sarudzo neyakajairwa Galaxy Watch 4, iyo inopihwa muBlack, Sirivheri, Green, uye Pink Goridhe. Iyo Galaxy Watch Classic inongopihwa mune nhema neBlack sarudzo.
Samsung iri kusvikira kuwanikwa kweGlass Watch 4 sezvainoita mafoni efoni. Mitengo inotanga pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematatu emadhora eiyo madiki maBluetooth-chete Galaxy Watch 4 uye $ 249 yemhando huru yeBluetooth. Imwe neimwe yeGlass Watch 4 Classic modhi kazhinji inodhura $ 279 yakawanda kupfuura shamwari yayo yemitambo. LTE-yakabatana misiyano yakatodhura uye inotengeswa neVerizon neAT&T muUnited States.
Dhizaini: Sarudzo yemunhu wese
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 uye Galaxy Watch 4 Classic inoitirwa vanhu vakasiyana vane zvakasiyana zvavanoda.
Ngatitangei neiyo base modhi. Iyo Galaxy Watch 4 yakaonda uye yakareruka kupfuura yeClassic. Yakagadzirwa neyakareruka zvinhu, aruminiyamu, uye inofanirwa kuve sarudzo yemitambo. Iyo zvakare inosiya iwo epanyama anotenderera bezel ayo anowanzo sangana neiyo yeGirazi Kutarisa mutsara, asi iine inobata-inogoneswa bezel iyo inoita kuti iwe utendeke chigunwe chako kutenderera kumucheto kwechigadzirwa kuti utsvaire kuburikidza nesoftware menyu. Inobatsira, asi hapana kwese padyo senge iri nyore kushandisa seyeyeClassic bezel.
Iyo Galaxy Watch 4 Classic ine simbi isina simbi uye inorema zvishoma pane yakajairwa Galaxy Watch 4. Inoenderana neGlass Watch 4 mu kugwinya maficha.
Iyo Galaxy Watch 4 uye Watch 4 Classic yakakwana kune ese-zuva kupfeka.
Ini ndawana ese smartwatch kuti ave akasununguka kune ese-ezuva kupfeka. Ini ndinoda iyo Galaxy Watch 4 pamusoro peiyo Classic modhi; ingori yakapusa uye yakapusa kupfeka zuva rese pawrist.
Kunyange zvakadaro, ini handitarisiri kuti Galaxy Watch 4 igare zvakanaka munhu wose zviuno, zvirinani kwete netambo dzakapihwa dzesilicone. Iwo smartwatches ane imwe ye Fitbit Ionic dambudziko apo kona iyo mabhanhire anosunganidzwa kune iyo kesi inobuda zvishoma kupfuura zvandingade, ichisiya imwe nzvimbo yekuwedzera pasi pemakanda emhosva. Inoita kuti mawachi anzwe akasimba kupfuura aanofanira kuve. Izvi zvinogona kugadziriswa netambo yakasarudzika iyo isina akafanana angled zvinongedzo seye stock silicone mabhande anotumira nemawachi nekutadza.
Kunyangwe paine kuwanda kwezviyero zvemakesi, ese maGlass Watch 4 mamodheru anoenderana neyakajairwa 20mm tambo. Tambo dzesilicone dzinotakura nemhando mbiri idzi dzakapfava uye dzakasununguka kupfeka zuva rese, asi ndakave negehena yenguva kuyedza kuzvichinja. Iyo tambo tambo inogara yakakwenenzverwa netambo yacho pachayo, saka kuchera chigunwe mubhanhire kuti ubvise kwakaratidza kunetsa, zvirinani kwandiri.
Iwe unogona kutenga yakawedzera dehwe uye silicone tambo zvakananga kubva kuSamsung. Ehezve, kana iwe usingade zvaunoona pane webhusaiti yeSamsung (kana iwe uchingoda chete kuchengetedza imwe mari), vamwe vatengesi vane sarudzo hombe yetambo dzekutarisa kusarudza kubva. Isu takabatanawo kune edu epamoyo pazasi.
Sezvambotaurwa, ese mamodheru anouya madiki uye makuru saizi. Yedu Samsung Galaxy Watch 4 yuniti yekuongorora ndiyo yakakura 44mm saizi uye ine 1.36-inch AMOLED chidzitiro. Kune zvakare 40mm Galaxy Watch 4 ine 1.19-inch kuratidza. Iyo Galaxy Watch 4 Classic inouya muna 46mm uye 42mm (isu tine iyo diki), iyo iine saizi dzakaenzana saizi sevamwe vakaenzana saizi.
Izvi hazvifanire kuuya sekushamisika, asi iyo Galaxy Tarisa 4's AMOLED mapaneru anotaridzika. Ivo vanowana inopenya yakajeka, mavara ari punchy, uye ivo vanopa akajeka ekuona angles.
Iwo mawatch ane ambient mwenje maseru kuitira kuti chako kupenya kwescreen chigadzirike otomatiki kana iwe ukachinja kubva kunze uchienda mukati meimba. Ini handina kumbove nematambudziko nezviratidziro zvekunyanyisa kudzika kana kupenya mukati meimba ini ndirere pamubhedha kana panze kunze kwakanangana nezuva.
Bhatiri: Zvakanaka, kwete zvikuru
Ose maviri akakura-akakura mawadhi ane 361mAh bhatiri uye madiki mamodheru ane 247mAh mabhatiri. Zvisinei nemhando ipi kana saizi yaunosarudza, Samsung inoti yega yega inofanira kukugarisa kwemaawa makumi mana pamubhadharo mumwe chete. Icho chaicho hachisati chiri chiitiko changu.
Ini ndakanyanya kushandisa iyo hombe Galaxy Watch 4 mukuyedzwa kwangu uye ndanga ndichigara ndine wachi yekupedzisira mazuva 1.5 pamubhadharo mumwe chete. Mushure meinenge zuva nehafu yekushandisa, wachi yangu yakarova 15% bhatiri mushure mekuratidzwa nguva dzese-kuratidzwa, kurerekera-kumuka, auto-kupenya, kurova kwemoyo uye kudhinda kureketa kwayedza, Wi-Fi, NFC, uye nzvimbo pa, uye husiku humwe hwekurara uchiteedzera neSpO2 zviyero. Ini ndakamhanyawo mamaira mashanu kunze neiyo GPS inogoneswa.
Hupenyu hwebhatiri hwakanaka kune Wear OS chishandiso, asi zvakadaro hachina kunaka seFitbit kana Garmin smartwatch.
Pane rimwe zuva, ndakaenda kunorara ne40% bhatiri mushure memaawa makumi maviri nemana ekushandisa pamwe nezvimiro zvakafanana zvandaishandisa pamusoro, ndisina kana kurovedza muviri.
Mhedzisiro iyi yakanyatsonaka uchifunga kuti ndanga ndichisunda wachi zvakanyanya. Asi sezvazvinowanzoitika nekufungidzira kwebhatiri rewatchwatch, fungidziro yekambani "kusvika kumaawa X" zvinoreva kuti uchafanirwa kudzima mamwe ma sensors kuti usvike ipapo. Zvakare, ini ndoda kuziva kuti chero musanganiswa wegadziriro dziri pamusoro unogona kutsausa mhedzisiro yako - aya mabhatiri madiki atiri kubata nawo, shure kwezvose.
Kubva kuruboshwe kurudyi: Samsung Galaxy Watch 4, Garmin Venu 2
Iyo 40mm Galaxy Tarisa 4 Classic haina kugara kwenguva yakareba seyakakura modhi panguva yekuyedzwa. Ini ndakakwanisa kuitora kuti igare kwemaawa makumi maviri nemana pacharge (nehusiku humwe hwekurara kwekutevera), asi ndizvozvo.
Kana iwe uri mushure mekureba kwenguva refu Galaxy Watch 4, tenga imwe yeakakura.
Nehurombo, hupenyu hwebhatiri yeWear OS haisati yakwana kukwikwidza nemamwe mapuratifomu akaita saFitbit naGarmin, ayo anga ari ekupedzisira mawadhi eGoogle kwemakore.
Imwe yemusoro mukuru wandakave nawo nemawachi maviri inguva yavo yekuchaja. Vaviri vanogona kugamuchira anenge maawa gumi ekushandisa mushure memaminitsi makumi matatu chete ekuchaja, asi chaji yakazara inotora angangoita maawa maviri azere. Iyo inguva refu yekugara ukamirira kudzosera smartwatch yako pairi. Inenge iri hurukuro yakasiyana kana vachingoda kubhadhariswa vhiki rega rega kana zvakadaro, asi aya ndeemaawa maviri kusvika kumazuva maviri.
Hutano uye kugwinya kwekutevera: Kufamba munzira kwayo
Usati waenderera mberi: Iwe unofanirwa kuziva mashoma eano hutano-ekuteedzera maficha Samsung kushambadza ndeye chete kune eGirazi Watches paired ne Samsung mafoni. Iyo Galaxy Tarisa 4 akateedzana inopa electrocardiogram (ECG) chimiro, chinokutendera iwe kutora kuverenga kweECG pane-kudiwa. Iyi ficha ndeye chete kune zvishandiso zvakabatanidzwa nefoni dzeSamsung, sezvo zvinoda kuti iwe uise iyo Samsung Hutano Monitor app pafoni yako. Iyo Galaxy Watch 4 inogona zvakare kushandisa yako smartphone kuongorora yako ngonono usiku, asi, zvakare, ndeye Samsung chete mafoni.
Isu tichataurawo muchidimbu kuti mawatch eSamsung anogona kuongorora kuverenga kweropa, asi chimiro ichi chakanyanyisa. Inongowanikwa muAustralia uye, iwe wakafungidzira, unoda Samsung foni kuti iite kuti ishande.
Iyo Samsung Galaxy Tarisa 4 akateedzana anoteedzera ese ehutano ehutano matanho aungatarisira. Iyo inoteedzera nhanho dzako, zuva nezuva koriori kupisa, anoshanda macalorie, chinhambwe, yakazara inoshanda nguva, kurara, ropa reokisijeni mazinga (pane-kudiwa uye panguva yekurara), kuzorora uye kushingaira kwekurova kwemoyo, uye kushushikana. Zviitiko zvezviitiko zvinoteedzerwa kuburikidza neSamsung Hutano, kwete Google Fit.
Hakupo Fitbit kusanganiswa kunowanikwa, sezvakataurwa panguva ye Wear OS 3 kuvhura. Tinotarisira kuti avo vanosvika kamwe zvakare Wear OS 3 mawachi abude.
Zvimwe zvakawanda: Ese maWear OS 3 mawadhi akasimbiswa kusvika parizvino
Kupfuura makumi mapfumbamwe emitambo modhi inogona kuteverwa pamwe neGlass Watch 90 dzakateedzana. Iwo mabhesiki ari ese pano, sekumhanya, kukwira, kuchovha, uye yoga. Kune akatiwandei mahurema ekusimudza modes aunosarudza kubva pamwe nekutsimbirira kwebhenji, mawoko emaoko, uye makumbo makumbo. Iko kune kunyange snorkeling modhi kana iwe uri mune izvo.
Munguva yeGPS-inogoneswa kurovedza muviri, iwe unowana yekudzidzira dhata senge kumhanya, kukwirira, cadence, moyo rate nzvimbo, kutsemuka, uye VO2 max. Ini ndinonyatsoda mashandiro anoita Samsung Hutano zvese zvemashure-zvebasa. Nhanho / kukwirira machati anoita kuti zvive nyore kuona kuti data rako rese rinobatana sei.
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 inopa kune vamhanyi nekupa epamberi ekumhanya metric. Ndakarumbidza izvi metric mune yangu Galaxy Watch 3 ongororo, uye ndinofara kuvaona vadzoka gore rino. Iyo Galaxy Watch 4 inoteedzera yako asymmetry, nguva yekuonana, nguva yekubhururuka, kugara, kutwasuka, uye kuomarara mune yega yega kumhanya kwako. Iwe unowana mamaki kune yega yega (kunatsiridza, kunaka, kana kukuru), izvo zvinogona kubatsira kana iwe uri kuyedza kurovera pasi yako inomhanya fomu.
Ndinoona zvinonakidza kuchera kuburikidza iyi data. Kuomarara kwemetric, semuenzaniso, kwakaratidza kuti ndaive ndakaomarara mukati memaminitsi makumi matatu nemashanu ekumhanya kwangu, yaive nyaya yeimwe yekurovedza muviri.
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 nhepfenyuro ine izvo zvinodaidzwa ne Samsung kuti BioActive sensor, iyo inosanganisira yayo optical moyo rate sensor (PPG), electrocardiogram (ECG), uye bioelectrical impedance (BIA) sensor. Ngatitangei titaure kurova kwemoyo kutanga.
Ini ndinobvuma kuti ndainetseka apo Samsung yakandiudza kuti yaishandisa zvakafanana sensor yemoyo module yakaonekwa muGlass Watch 3 uye Inoshanda 2. Ose iwo mawachi akaenzanisa zvakanyanyisa zvakanyanya kune mamwe anopfeka uye tambo dzechipfuva maererano nemoyo wekururamisa.
Asi iyo Galaxy Tarisa 4 akateedzana ane maalgorithms matsva ekugadzirisa iwo matambudziko. Uye mukuyedzwa kwangu, ini ndatoenda ndichifadzwa nekururama kweGlass Watch 4. Ona pazasi kumhanya kupisa-uye-kudikitira uchienzaniswa ne Nhepfenyuro dzeApple 6 uye Polar H10 chipfuva tambo.
Iyo Galaxy Watch 4 yakaramba yakachengetedzeka pamwe nePolar H10 uye Apple Watch mukati menguva ingangoita kumhanya kwese. Uku kwaive kumhanyisa kumhanya kuzere nekuti kwaisanganisira zvikomo, mabhureki, uye maviri makuru ekumira maporesi pandakazorora kwenguva pfupi. Kunyangwe pazvikwiriso zvepamusoro-soro uye mumipata yakadzika kwazvo, iyo Watch 4 yakashuma nhamba dzakarurama.
Ona pazasi kuti unyatsotarisisa chikamu chepakati chekumhanya, chine zvese zviri zviviri zvine hukuru hwekuwedzera kwemoyo pakati.
Apa ndipo paunogona kutanga kuona mutsauko pakati pemidziyo mitatu, zvakadaro. Watch yeSamsung inongoratidzira kuverenga kwemoyo masekondi makumi matatu ega ega, nekudaro kushomeka kweminiti yedhata mumatanho akakwirira nekudzika (ona 30: 27-00: 35). Yakanyora chirevo chezvaiitika nemoyo wangu, asi zvakawanda zvakasiiwa kunze nekuda kwekukanganisa kwenzwi rekodhi.
30-yechipiri marekodhi anofanirwa kuve akanaka zvakakwana kune vanhu vazhinji. Uye ngatitendesei, izvi zvaifanira kunge zviri zvidiki zvekushushikana kweSamsung kana uchigadzirisa maalgorithms ayo eanonzwa. Asi "zvakanaka zvakakwana" zvirinani pane zvandaifungidzira, saka ndiri kufunga kuti kuhwina kweiyo Samsung yekurova kwemoyo sensor. Ruvara kwandiri rwakaorora!
Samsung yakazviita - iyo Galaxy Watch 4 yemoyo yekurova sensor inogona kuenderana nezvakanakisa.
GPS kurongeka kuri, zvinosuruvarisa, imwe nyaya. Ini ndakagadzirira kupa Samsung bhenefiti yekusahadzika neinotevera kumhanya (pazasi), sezvo yaive chikamu chegore uye ini ndanga ndisiri kudzivisa nzvimbo dzinonetsa semabhiriji kana inorema kufukidzwa kwemuti. Zvakadaro, ngatione kuti inofananidzwa sei neApple Watch Series 6 pane yakatambanuka yemugwagwa ine inorema miti kufukidza:
Iyo Apple Watch yakanamatira mumugwagwa isina nyaya. Iyo Galaxy Watch 4 yakaita yakawanda yenguva zvakare, kunyangwe ichipinda mudzimba nemayadhi zvishoma kupfuura zvandaizoda.
Pakati peimwe chikamu chekumhanya (pazasi), ini ndakatora mawadhi maviri kuyambuka Rwizi Rwizi pasi pebhiriji rakateverwa nekukurumidza maviri-block Sprint kutenderedza zvimwe zvivakwa. Zvakare, iyo Apple Watch ndicho chigadzirwa chekumira pano, nepo iyo Galaxy Tarisa 4… isiri.
Zvekare, iyi yaive nzira yakaoma kune chero GPS tracker yekutora, uye mhedzisiro senge iyi zvinosiririsa parutivi rweiyi kosi yezvakawanda zvinopfeka. Zvakadaro, ini ndaizodaidza kusimudzira pane izvo zvataive nazvo neiyo Galaxy Watch 3 uye Inoshanda 2.
Asi ipapo, pane zuva rakanyatsojeka, iyo Galaxy Watch 4 yakabhururuka yangu 15-mamaira kumhanya munzvimbo shoma. Ona pazasi pekuenzanisa pakati peGarmin Fenix ​​6 Pro uye Galaxy Watch:
Haisi chete iyo Samsung wachi yakandiisa murwizi kwehafu yakanaka mamaira, yakapotsa yapotsa zvachose veer yangu kuenda kunhandare yenhabvu kunotora kuzadza kubva patsime remvura (ona mutsetse wegirini uri pasi pe "Mercyhealth Sportscore").
Izvo hazvina kuwana zvirinani gare gare mukumhanya, uko iyo Galaxy Watch, zvakare, yakapotsa zambuko uye ikandiita ndichimhanya nemumvura. Izvo hazvina kuzombonyatsopora mushure meizvozvo. Iye zvino, kuverenga kweFenix ​​6 Pro hakusi stellar pano futi, asi iwe unogona kuona iko iko chinogadzirwa naGarmin chakanamatira kune yakatarisana nzira.
Kuongorora data reGPS ichi hachisi chinhu chakanyanya kukosha kumbobvira chaitika, asi chinopedzisira chadzora manhamba ekupedzisira pakupedzisira. Zvekumhanya uku, kunyanya, iyo Fenix ​​6 Pro yakashuma chaizvo mamaira gumi neshanu nepo Galaxy Watch ichingozivisa 15 mamaira. Aya marudzi ekukanganisa anogona kuwedzera kumusoro.
Iyo Galaxy Watch 4 inoshandisa musanganiswa wemwoyo uye kurova kwemoyo kusiana data yekutevera yako kunetseka Icho chiito chakanaka, kunyange ini ndisina kuona kuti chinonyanya kubatsira mune Samsung Hutano app kana pawachi pachayo. Ndanga ndiri, kuti ndiise zvishoma, ndakanyanya kushushikana nguva pfupi yadarika, uye iyo Galaxy Watch 4 inondiudza kuti kushushikana kwangu kwakajairika. Kana ndacherekedza spike mumatambudziko angu muSamsung Health, chese chandiri kuona ndechekuti ndakatora nguva yakareba zvakadii iyo nhanho yepamusoro uye chiyero chayo pakati pe "avhareji" ne "yakakwira." (Kwete iyo yesainzi girafu yandakamboverenga.) Iyo app haina kupa chero imwe ruzivo, senge zvaive zvakaverengwa nemoyo wangu kuverenga panguva iyoyo, dai ndaive ndichishanda, nezvimwe.Ku Samsung kiredhiti, inoti yako kushushikana kuyerwa “Hazvireve hazvo kuti uri kunzwa sei.”
Iwe unogona, zvakadaro, shandisa iyo yeGlass Watch 4 yakavakirwa-mukati yekufema maekisesaizi kana iwe uchinge uchinzwa kudiki zvakare yakasimba kwazvo ronda. Wachi yako inogona kukubatsira iwe kufema nekutungamirwa kwekufema maekisesaizi kusvika pamaminitsi mashanu kana uchizvida.
Dhata yemoyo kusiyanisa dhata haina kupihwa seyakamira metric muSamsung Hutano, uye Samsung yakatipa "hapana chirevo" patakabvunza kana zvaizove mune ramangwana.
Tevere, pane iyo nyowani bioelectrical impedance sensor. Mushure mekuisa minwe yako pamabhatani maviri epanyama kwemasekondi gumi nemashanu chete, iyo Galaxy Watch 15 ichaedza kuona muviri wako mametric semasaga emhasuru, basal metabolic rate (BMR), body mass index (BMI), kuchengetedza mvura, uye mafuta emuviri muzana.
Ini handisati ndanyatso kwanisa kuwana mafuta emuviri ongororo yakaitwa kuhofisi yechiremba nguva pfupi yadarika, asi ini ndichigona kuenzanisa imwe yedhata reGreen Watch 4 neyangu Garmin Index S2 chikero. Iwo maviri madhijitari akarongedzwa angangoita chaizvo neBMI yangu uye manhamba ekuchengetedza mvura. Chiyero chaGarmin chaifungidzirwa kuti ndaive ne2% mamwe mafuta emuviri kupfuura iyo Galaxy Watch yaifungidzirwa, uye Samsung yakaratidza huwandu hwangu hwekuchengetedza mvura neanenge mapaundi matatu zvichienzaniswa neiyo Index S2. Garmin akafungidzirawo kuti tsandanyama yangu yemabhonzo yaive pa ~ 74 lbs, nepo Samsung ichiti ndaive padhuze ne ~ 78 lbs.
Kune zvigadzirwa zvevatengi, zvakaoma kuisa yakawanda kwazvo stock mune chaiyo mametriki, zvikasadaro, iwe unogara uchishamisika kuti vanoenzanisa sei neyako chaiyo, nhamba dzinozivikanwa nachiremba. Chinhu chakakosha kusagadzikana. Iwe unoda yako Galaxy Watch 4, yako smart sikero, kana imwe hutano uye hutano chigadziro kukupa iwe inowirirana manhamba kuti iwe ugone kuteedzera mafambiro nekufamba kwenguva. Neraki, Samsung Hutano inopa maitiro ezvese izvi data mune zvezuva nezuva, zvemwedzi, uye zvegore. Kuona sekuti mhedzisiro yandakatambira kubva kuGlass Watch 4 pavhiki yapfuura yanga iri inowirirana (kupa kana kutora mashoma kuverenga), ini ndingangoti iyo Galaxy Watch 4 yemuviri mametric metrics anokunda zvachose.
Iyo yeGreen Watch 4 yemuviri mametric metric inogona kubatsira, asi iyo data inofanirwa kuongororwa nekufamba kwenguva.
Kuva nemamiriro emwoyo hakusi nyore kana kunakidza, uye kushanyira hofisi yechiremba uye kubhadhara mari inodhura ekuongororwa kweECG kunogona kukwegura nekukurumidza. Iyo Galaxy Tarisa 4's ECG chimiro hachisi chekutsiva bvunzo yezvechiremba, uye iwe unofanirwa zvachose ona chiremba kana iwe uchiona kuti pane nyaya, asi chimiro chakavakirwa muGlass Watch 4 chinogona kushandiswa mune piniki kana iwe ukaona chimwe chinhu chisina kunaka.
Kurekodha ECG kunotora masekondi makumi matatu uye chinguva chekunyarara. Kamwe kurekodha kwako kwapera, unogona kuona mhedzisiro yako mu Samsung Health Monitor app pane yako smartphone uye kutumira kunze mhedzisiro kuna chiremba wako kana zvichidikanwa. Hezvinoi izvo zvinyorwa zveGlass Watch 30 zvinotaridzika zvichienzaniswa nemamwe maEECG akasimbiswa-kubva kubva ku Withings ScanWatch, Apple Watch Series 6, uye Fitbit pfungwa.
Iyo Galaxy Watch 4 zvakare inokwanisa kurekodha yako ropa oxygen oxygen (aka SpO2) pane-kudiwa mukati mezuva rese kana husiku paunenge wakarara. Ku-kudiwa kuverengwa neGlass Watch 4 yakamiridzana zvakanaka nemamwe majaira anoshandiswa kurekodha kupomba oximetry. Ndakaiyedza ndichipesana neiyo Withings ScanWatch, Apple Watch Series 6, Garmin Fenix ​​6 Pro, uye yangu yakavimbika matinji yekutarisa, uye ese akadzoka pakati pe95-99%. Ini kazhinji ndainyura pazasi pe95%, zvakadaro, saka izvi zvawanikwa zvaitarisirwa.
Usiku, iyo Galaxy Watch 4 inounganidza data reoksijeni reropa mumineti-yeminiti yekuwedzera paunenge wakarara. Sezvineiwo, mazhinji mamwe mawrist-akapfeka anopfeka anongorekodha kuverenga kweSpO2 yega yega maminetsi makumi matatu kana zvakadaro. Ndakarara neGlass Watch 30 naFitbit Sense pachiuno changu manheru ega ega kwevhiki rapfuura, uye zvinozorodza kuvhura Samsung Hutano uye nekuona yakazara girafu yenhamba dzangu dzeSpO4. Iyo Fitbit app, kune rumwe rutivi, inongoratidzira mavhareji ehusiku, izvo zviri pachena zvisinganyanyi kubatsira kune avo vari kuyedza kutarisa yavo yeropa oxygen nhamba.
Iyo Samsung Galaxy Tarisa 4 inoteedzera ako ekurara matanho (mwenje, yakadzika, REM), nguva yakamuka, SpO2 (sezvakataurwa pamusoro), uye kunyangwe yako ngonono chero bedzi uine pairi Samsung foni. Nezve rekodhi, ini handisi munhu anorova, saka ini handina kumbobvira ndagamuchira chero snoring data.
Ini ndaishandisa iyo Fitbit Sense seyangu yekuenda-kurara tracker yeichi fananidzo nekuti ini ndawana inopa inopa inonyanya kukosha, yakajeka data kubva kune yechiuno-chakavakirwa chishandiso. Pausiku hwakawanda, iyo Galaxy Watch 4 uye Fitbit Sense akagadzira matanho avo ekurara zvakanaka. Ivo vaviri vakabata yangu isina kujairika yepakati-husiku yekugezera mabhureki, pamwe neakakura maREM uye mashoma matanho.
Pane musiyano mudiki pakati penzira iyo madhivhosi maviri anobata yakazara yekurara data, ayo anogona kukanganisa ako ekurara mamaki. Pahusiku humwe, iyo Sense yakashuma maawa manomwe nemaminetsi makumi mashanu ekurara uye 45 awa nemaminetsi masere ekumuka. Iyo Galaxy Watch 1 yakataura maawa manomwe nemaminetsi makumi maviri nemaviri ekurara uye awa rimwe chete nemaminetsi makumi matatu nemana ekumuka. Iyo Galaxy Watch, zvakadaro, yakawedzera kumusoro zvose yeiyi data uye ndikataura huwandu hwemaawa mapfumbamwe nemaminetsi manomwe ehoridhe nguva yekurara, kunyangwe ini ndanga ndisina kurara mukati memaawa anenge maviri ehusiku ihwohwo. Izvi zvakaita kuti hope dzangu dzekurara dzidzikire pasi makumi mashanu (kubva pa50, izvo zvisina kunaka) nekuti kuwana anopfuura maawa mapfumbamwe ekurara kunogona kukanganisa maitiro ako ekurara.
Neraki, kumwe kudonhedza mu Samsung Health app inofanirwa kukwanisa kugadzirisa iyi nyaya. Zvakadaro, chengeta izvi mupfungwa kana uri kuisa stock muSamsoni yehusiku husiku hwakawanda.
Iyo itsva Wear OS: Zvizhinji zveSamsung, yakawanda shanduko, uye yakawanda zvipikirwa
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 ndiyo, zvechokwadi, yekutanga smartwatch kumhanya paGoogle uye Samsung yakabatana Wear OS 3 chikuva. Asi kunze kwekunge uri mumwe wedu uye uine hanya nezvepasi pepuratifomu yesoftware inosimbisa ruzivo rwese, unogona kusatomboona kuti zvinhu zvachinja zvakanyanya kubva kune yekupedzisira Galaxy Watch. Isa zvakapusa, izvi zvinonzwa seGlass Watch ine Samsung software, chete nezvishoma zvinozivikanwa Wear OS zvinhu zvakapepetwa kutenderera.
Kutaura chokwadi, Google yanga yakanyarara kupfuura iko Wear OS pachikamu chayo ichatsvaga vagadziri vewatchwatch avo vanoda kutora chikuva chitsva. Zvakafanana kana Google yakazivisa Android yemafoni efoni, asi foni yekutanga kunze kwegedhi yaive Galaxy S chishandiso - ungangoshamisika kuti chikamu chipi cheiyo software ndechaGoogle uye chikamu chei Samsung.
Chikamu cheichi chakanaka nekuti Google iri kubvumidza vagadziri vewatchwatch mukana wekugadzirisa Wear OS 3 kune kwavo kufarira. Asi izvi zvakare zvinoreva kuti isu tichaona zvakanyanya zvakasiyana zviitiko zve software zvichienderana nemugadziri wewatchwatch. Muchiitiko cheiyo Galaxy Watch 4, Samsung yakatora iyo pfungwa ndokumhanya nayo.
Pfeka OS 3 ne Samsung Yeimwe UI Tarisa kufukidza jekiseni nemaSamsung maapplication, masevhisi, uye maitiro. Google Fit haisisiri yeiyo yega yega yeapplication kusimba; iri Samsung Hutano. Samsung Bhadhara, kwete Google Pay, ndiyo yekutaurirana isingabhadharwe system inotakura nekutadza. Unogona kudhawunirodha Google Pay kubva kuGoogle Play Store, zvakadaro. Samsung's app kudyidzana kwaitawo nzira yavo kuchikuva chitsva - Microsoft Outlook inowanikwa pane iyo Galaxy Watch 4 kunze kwebhokisi, sezvazviri pamafoni eSamsung.
Kumwe kufananidzwa nefoni dzeSamsung ndekwekuti iyo Galaxy Watch 4 inouya ne * rolls eyes * duplicate apps. Kune maviri maalarm apps, maviri ma timer maapplication, uye mairi maviri ekumira kwemaawa. Samsung iri kuenda kuSamsung.
Wear OS 3 ine Samsung One UI Watch inhanho munzira kwayo, asi ichanyanya kukwezva kune avo vari mune ecosystem yeSamsung.
Iko hakuna zvakare Google Assistantt inowanika paGlass Watch 4 nhepfenyuro, kunyangwe Mubatsiri ari musimboti wepuratifomu pane Wear OS kwemakore. Uku kwaive nemaune kufambisa neSamsung kuisa pamberi peayo mashoma-akanaka izwi mubatsiri, Bixby. Google neSamsung vanoti rutsigiro rweMubatsiri rwuri mumakadhi, asi hapana kambani yakapa nguva yekuti ichasvika riini.
Sezvo iyo Galaxy Watch 4 ikozvino yave nekugona kuGoogle Play Store, zvinoreva kuti unokwanisa kuwana mamwe maGoogle maapp. Iyo nyowani-uye-yakavandudzwa Google Mepu iri pano uye inoshanda mushe mushe, kunyangwe iri hombe yebhatiri drainer senguva dzose.
YouTube Music iri kuuya nekukurumidza kuWear OS 3, izere nekutora pasi, asi izvo hazvisati zvavapo. Spotify anoti iri kuvandudza zvakare yayo Wear OS app kutsigira kudhawunirodha pasina, asi zvakare, haisati yavapo. Nekudaro, kana iwe uchida kuteerera mimhanzi pane wachi yako pasina foni yako padhuze, uchafanirwa kuvimba nemuno mimhanzi faira kurodha. Neraki, Samsung inoita kuti zvive nyore zvakakwana kuendesa mimhanzi kune wachi kuburikidza neiyo Galaxy Wearable app.
Zvakare, mazita anozivikanwa senge Kurara Cycle, Adidas Kumhanya, Strava, Swim.com, Period Tracker, uye Calm ichave ichitangisa zvese-zvitsva zveWear OS zviitiko kutanga Nyamavhuvhu 20.
Ini ndoda kujekeserwa: iyo Galaxy Watch 4's software yakanaka. Ini ndamhanya ndisina hukuru hukuru kana nyaya dzekuita munguva yangu yese nazvo, iri kunyatso kutaura chimwe chinhu kune yakawanda-nyowani chikuva.
Ini ndinodawo mushandisi interface. Ini ndinoona zviri nyore kwazvo kufamba-famba kutenderera kupfuura shanduro dzekare dzeWear OS. Iwe unoshambira pasi pachiratidziro kuti uwane nekukurumidza marongero, swipe kurudyi kune zviziviso, kuruboshwe kune maTiles (aka majeti), uye kumusoro kune ese-maapplication skrini. Taura zvaunoda nezveGoogle kutevedzera Apple's bubbly ese-maapplication peji, asi zvinoshanda. Kutsvaga uye kuvhura maapplication inzira iri nyore izvozvi. Kutaura nezve izvo, iwe unogona ikozvino-pinda-yepamusoro-kurudyi bhatani bhatani kuvhura yako ichangoburwa kushandiswa app, yakafanana nekuti inoshanda sei paApple.
Pane zvakawanda zviso zvitsva zvewachi zvekutamba nazvo paGreen Watch 4. Zvimwe zviri nyore uye zvakapfava, zvimwe zvinodzidzisa, zvimwe zvinopenya, uye vashoma vangori… mabhanana. Imwe yekumeso yeanalogi inotsiva iyo "mitatu" neimwe mhando yemichero kana miriwo ine ngowani, iyo inobhururuka yakatenderedza paunomutsa wachi yewachi. Ini handimbofa ndakataurira nguva nemazvo neichi chiso chewachi, asi ini handina kana basa nazvo. Zvinongondiunzira mufaro.
Sepuratifomu, ndinofunga Wear OS 3 inoratidza vimbiso, uye yatove kuenda kune zvinoshamisa zvinoshamisa kutanga. Google ine Samsung - rimwe remazita mahombe muindasitiri - inotsigira yayo nyowani-uye-yakavandudzwa chikuva. Kunyangwe zvakadaro, ndinovenga kuve mukomana anounza zvakapfuura zveGoogle, asi ndiri kuzounza zvakapfuura zveGoogle. Google yagara yakaita basa rakashata pakuchengeta vhezheni dzapfuura dzeWear OS yakagadziridzwa. Iyo yakazivisa yayo ishoma software inogadziridza mumidziyo maforamu, semuenzaniso, uye rega makuru makuru mabugs aende chisina kugadziriswa kwemwedzi.
Kuzvipira kwaGoogle kugadziriso kuchaita kana kuputsa Wear OS 3 kubudirira nekufamba kwenguva.
Munguva yeWear OS 3 kuvhura, Google yakati yaizoburitsa kakawanda kugadziriso papuratifomu, asi kambani yakazivisa kubvira Android Authority haina "chinhu chekugovana" pamusoro pekuti kangani inoronga kuburitsa zvidzoreso. Ini ndinoona izvo zvine chekuita nekutarisa kwayo track track. Unhu hweWear OS 3 paGlass Watch 4 ichave yakasungirirwa zvakananga kuti Google neSamsung vanokwanisa sei kutaurirana pachavo pazvinogadziridzwa.
Kubva pane zvandinounganidza, zvakadaro, Samsung ine tariro yehupenyu hurefu hwepuratifomu uye yakati ichaenderera nekuvandudza yayo yepakutanga One UI Tarisa maapplication uye gadzira mabugs sezvavanobuda. Isu tinongoda kutarisira kuti Google iri pano kuzotamba bhora nguva ino uye usarega zvinhu zvichipfuura sezvaimboita.
Mamwe mashoma ma software tidbits akakodzera kugovana:
Chiitiko chakasiyana cheboardboard: Kana iwe wakambomisa Wear OS chishandiso, maitiro acho zvino awanda zvakanyanya sekumisikidza Samsung smartwatch. Iwe haushandise iyo Wear OS smartphone app zvachose. Iye zvino, unotora download Samsung's Wearable app uye ita zvese kubva ipapo, kubva kune yekutanga setup chikamu kusvika pakuchinja maziso ekuona. Zvakare, pane asiri-Samsung mafoni, iwe uchiri kuda kurodha ekuwedzera kumashure maapplication senge Samsung Yekuwedzera Sevhisi uye Galaxy Watch 4 plug-in.
Setup zvakanaka: Munguva yekumisikidza, iyo Galaxy Watch 4 ichaisa otomatiki mapurogiramu aunazvo pafoni yako saka haufanire kuatsvaga kuburikidza neiyo Play Store sezvawaimboita kare. Iyo wachi inoonawo marongero efoni senge asingavhiringidze uye akavharidzira vafona.
Hapasisinazve rutsigiro rwe iPhone: Kusiyana neyekare Wear OS vhezheni, haina kutaridzika seWear OS 3 zvishandiso zvichakwanisa kuwirirana nazvo iPhones. Takabvunza Google kana rutsigiro rwe iPhone ruchawedzerwa mune ramangwana, uye kambani yakati ine, "Hapana chekugovana maererano neramangwana remuchina uye zvirongwa."
Samsung Galaxy Tarisa 4 tsananguro
Samsung Galaxy Tarisa 4
Samsung Galaxy Tarisa 4 Classic
kuratidza 44mm: 1.36-inch Super AMOLED
450 x 450 chisarudzo
Corning Gorilla Girazi ine DX +
396 x 396 chisarudzo
Corning Gorilla Girazi ine DX + 46mm: 1.36-inch Super AMOLED
Corning Gorilla Girazi ine DX
Kuyera uye kuyerwa 44mm: 44.4 x 43.3 x 9.8mm
Inoenderana ne 20mm tambo 46mm: 45.5 x 45.5 x 11mm
Inoenderana ne 20mm tambo
Colors uye midziyo Aluminium kesi
Dema, Sirivheri, Girinhi (44mm chete), Pink Goridhe (40mm chete) Stainless simbi kesi
bhatiri 44mm: 361mAh
WPC-yakavakirwa isina waya kuchaja 46mm: 361mAh
WPC-yakavakirwa isina waya kuchaja
Dual-musimboti 1.18GHz 5nm Samsung Exynos W920
chengetedzo 16GB 16GB
Kubatana LTE (inowanikwa mune yakasarudzwa mamodheru)
GPS / GLONASS / Beidou, Galileo LTE (inowanikwa mune yakasarudzwa mamodheru)
GPS / GLONASS / Beidou, Galileo
Inonzi geomagnetic sensor
Samsung BioActive sensor: optical moyo rate (PPG), electrocardiogram (ECG), bioelectrical impedance kuongorora sensor (BIA) Accelerometer
Samsung BioActive sensor: optical moyo rate (PPG), electrocardiogram (ECG), bioelectrical impedance kuongorora sensor (BIA)
mukurumari 5ATM + IP68
Software Kupfeka OS
Samsung Imwe UI Tarisa Kupfeka OS
Samsung Imwe UI Tarisa
kugarisana Android Android
Samsung yakanakisa smartwatch, ikozvino ine Wear OS
Samsung neGoogle zvakabatanidza mauto ekuvandudza mamiriro e software nemawatchwatches pane Android. Mhedzisiro yacho ndiyo nyowani Samsung Galaxy Watch 4 uye Galaxy Watch 4 Classic, inomhanya iyo nyowani, yakabatana Wear OS. Iyo yakajairwa Galaxy Watch 4 ndeyevanhu vezvemitambo, nepo Watch 4 Classic iri yeavo vangade wachi yavanogona kupfeka kuhofisi.
$ 249.99 ku Amazon
$ 249.99 paSamsung
$ 249.99 pa Best Buy
$ 299.99 kuVerizon
$ 299.99 kuAT&T
Iyo classiest smartwatch Samsung inofanirwa kupa
Kana iwe uchitsvaga yekumusoro-kumagumo kuteedzera kune Samsung's Galaxy Watch 3, usatarise mberi. Iye zvino neWear OS mubhodhi, iyo Galaxy Watch 4 Classic ichave yakakwana kune yako rwendo kuenda kuhofisi kana husiku kunze.
$ 349.99 ku Amazon
$ 349.99 paSamsung
$ 349.99 pa Best Buy
$ 399.99 kuVerizon
$ 399.99 kuAT&T
Mune iyo Wear OS ecosystem, iyo Samsung Galaxy Tarisa 4 iri mumutambo wayo. Iyo chete ndiyo inomhanya iyo nyowani Wear OS 3 software, ichisiya mamwe ese apfuura-gen mawatch kuti nerunyararo apararire muHome.
Kana iwe uchinyatso, zvirokwazvo unoda a Pfeka OS smartwatch izvozvi uye havana kufarira iwadhi nyowani dzeSamsung, zvirinani tenga imwe yemidziyo miviri yeMobvoi yakasimbiswa kuti iwedzere kukwidziridzwa muna 2022: iyo TicWatch Pro 3 ($300) uye TicWatch E3 ($200). Nekudaro, isu tinokurudzira kusvetuka awa mawachi, sezvo iwe uchizofanira kumirira nguva yakareba kuti utore ruoko rwako pasoftware nyowani.
Imwe inotarisirwa kwazvo Wear OS smartwatch yegore yakarongerwa kusvika munguva pfupi. Iyo Zvisaririra Gen 6 runyerekupe rwekuvandudza mashandiro, hupenyu hwebhatiri, uye hutano-hwekutarisa maficha pamusoro peiyo Fossil Gen 5 smartwatch. Hatina chokwadi chekuti wachi iyi ichatanga riini, zvakadaro.
Sarudzo yedu yeakanakisa kusimba smartwatch pane Android ndiyo Garmin Venu 2 ($400). Smartwatch yaGarmin haina akawanda akangwara maficha segirazi reGallow 4, asi chimiro chayo chakanyatsogadzirwa, kuwanda kwemitambo yekutevera, uye hupenyu hukuru hwebhatiri hunoiita imwe yeakanakisa ekutora e2021.
The Fitbit Versa 3 ($229) ndiyo imwe nzira inodhura kune iyo Galaxy Tarisa 4 iyo inouya iine zvakawanda zvekusimba-kwekuteedzera maficha, inonakidza yekurara yekutevera, uye kunyangwe Google Mubatsiri uye Amazon Alexa kutsigira.
Kana iwe uri kuverenga izvi pane yako iPhone uye wanga uchitarisira kutsigirwa kweApple neWear OS 3, iyo Apple Watch iri (zviripachena) kukosha kuongorora. Iyo yedu smartwatch yatinofarira yenguva-dzese (uye ndiko kutaura chimwe chinhu chinobva kune webhusaiti inotariswa neApple), uye inogona kuwanzo kutengeswa. Iyo Nhepfenyuro dzeApple 6 ($400) ndiyo yepamusoro-yekupedzisira sarudzo, nepo iyo Apple Tarisa SE ($279) yakanaka bhajeti tora.
Samsung Galaxy Tarisa 4 ongororo: Mutongo
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 uye Galaxy Watch 4 Classic akanaka smartwatches, uye ini handingapi mhosva chero mushandisi weApple kuenda nekunotenga chero pazuva rekutanga. Ese emawatchwatch maficha anoshanda nemazvo, maficha maficha akawanda uye anovandudzwa, uye zvese zvishandiso zvinogona kugadzirirwa kune yako saizi saizi uye maitiro.
Ini zvakare ndinofunga Wear OS 3 iri kutotaridza kuvimbisa. Iyo software, kunyangwe ine One's UI Yekutarisa pamusoro peSamsung, yakatenderedza zvirinani uye nyore kushandisa pane Wear OS 2 uye Samsung yechinyakare Tizen software. Uyezve, bhenefiti yekutsamira paGoogle kune yayo hombe yekuvandudza ecosystem ichaita chete iyo Galaxy Watch 4 dzakateedzana zvakanyanya kusimba nekufamba kwenguva.
Iyo Samsung Galaxy Watch 4 ndeye inoshamisa smartwatch yandisingazeze kukurudzira kune chero mushandisi weApple.
Ndokunge, sekureba sekunge Google neSamsung zvichiramba zvichimhanya kupfuura nguva. Pamwe ndiri kugadzira chibvumirano chakakura kubva kuGoogle yakaipa yekuvandudza track rekodhi kupfuura zvandinofanira kuva, uye pamwe Google-Samsung kudyidzana kweWear OS 3 ichakura nekufamba kwenguva seruva rakanaka ratino tarisira kuti rinogona kuva.
Asi ngatirambei netariro pano. Iyo Samsung Galaxy Watch 4 uye Galaxy Tarisa 4 Classic ndeaya maviri anoshamisa smartwatches andisingazeze kukurudzira kune chero mushandisi weApple. Ingoziva kuti vashandisi veSamsung vanozofara zvishoma neicho chiitiko pane wese munhu.
Samsung Galaxy Tarisa 4: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino